Ny Redmi 8 dia haseho amin'ny 9 oktobra amin'ny fomba ofisialy | Androidsis
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Redmi 8A, ny finday ambany farany ambany an'ny marika sinoa. Tonga modely irery ity maodely ity, gaga ny rehetra, satria antenaina ny ho eo akaikiny ny Redmi 8 dia naroso ihany koa. Na dia hahalala an'ity modely ity aza dia mila miandry kely kokoa ianao.
ny daty fanolorana ofisialy an'ity Redmi 8 ity. Tsy ho ela dia ho fantatsika io fitaovana vaovao io ao anatin'ny marika ambany amin'ny marika sinoa. Ho fohy ny fiandrasana ary misy ihany koa ny tsaho momba ny zavatra hafoin'ity finday vaovao ity amintsika.
Manu Kumar Jain no lohan'i Xiaomi any India. Izy no niandraikitra ny fanamafisana ny fampisehoana an'ity Redmi 8 ity tao amin'ny piraofilina Twitter, miaraka amin'ilay sary hitanao etsy ambony. Amin'ny 9 Oktobra no hanaovana ny fampisehoana amin'ity andiany fidirana vaovao an'ny marika sinoa ity.
Efa misy ny tsaho momba ity maodely ity. Amin'ny zavatra nianarana dia afaka manantena bateria lehibe ao isika. Mandeha ny resaka fa mety ho bateria 4.900 mAh na angamba 5.000 mAh. Ka afaka manantena fahaleovan-tena tsara avy aminao izahay.
Ity Redmi 8 ity dia nantsoina ho fahombiazana vaovao ho an'ny marika sinoa. Indrindra amin'ny tsena toa an'i India, izay ahombiazan'ny varotra Redmi. Ny maodely toa an'ity, izay hamela antsika amin'ny famaritana tsara momba ny sokajy sy ny vidiny ambany dia ambany dia azo antoka fa hahomby.
Soa ihany, afaka andro vitsivitsy dia hiala amin'ny fisalasalana isika, satria amin'ny 9 Oktobra no hanolorana ny Redmi 8 amin'ny fomba ofisialy. Ary holazainay aminao ny zava-drehetra momba ity fitaovana ambany farany ambany ity avy amin'ny marika sinoa, izay azo antoka fa hamely ireo fivarotana amin'ity volana oktobra ity ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Redmi 8 dia efa manana daty fampisehoana voamarina
Mampandre anao i Google raha toa ka voageja na tsy azo antoka ny teny miafinao